Hiran State - News: HS:-Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya.
HS:-Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya.
HS:-Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya xiliga rasmiga ah ee ay meesha ka baxayaan hogaanka TFGda iyo baarlamaankooda.
Kadib mudo ku dhawaad 8 sano waxii ka danbeeyey 2004kii oo aheyd markii la dhisay baarlamaanka kumeel gaar ah ayaa waxaa soo baxaya in dhamaanba hogaanka sare sida madaxweynaha, xukumada C/wali Gaas ay meesha ka baxayaan waxii ka danbeeya bisha labaad ee sanadka soo socda 2012 iyadoo hada wadamada daneeya arimaha Somaliya ka shaqeynayaan oo kaliya farsamadii sida in baarlamaanka hada jira la kala diro. In tiro cayiman laga soo reebo iyo in waxkasta hoos laga soo bilabo intuba waa arimaha hada miiska saaran.
Sidoo kale shirarka ay QM ka wado Somaliya waxa loogu talo galay oo kaliya in loo ekeysiiyo magaalada Mogdisho goob nabad ah oo ay ka jirto wax u muuqaal eg nidaam dowladeed inta laga gaarayo shirar waaweyn oo dhawr ah oo loo qaban doono Somalida maadama hada la dareensan yahay in la joogo waqtigii uu wadanku ka bixi lahaa xiliga kumeel gaarka dhibaatada Somaliya ka taagana ay hada u gudubtay meelo ka baxsan Somaliya.
Marka la eego baaxada iyo qorshaha laga wado dibada iyo isbedelada siyaasadeed ee lala damacsan yahay Somaliya waxaa kuu soo baxeysa in hogaanka TFGda hada jira iyo gudoomiyaha baarlamaanka midkoodna uga furneyn jaanis siyaasadeed, wey dhici kartaa iney xulufo cusub la sameystaan wajiyada cusub ee imaan doona laakinse iyagu Picture-ka dhanba kuma jiraan waxaase u furan iney isa soo sharaxaan intaas ayey xaq u leeyhaiin oo kaliya sida ay sheegayaan warbixino aan walito loo soo bandhigin bulshada Somaliyeed kuwooda daneeya siyaasada qaarkoodna waxaaba loo soo jeedin doonaa ineysanba ku fikirin ololeba iney u galaan gursigaas maadama beesha caalamka dareensan tahay ineysan heynin siyaasado fur furan oo ay dalka ku maamuli karaan hogaanka hada jiro.
Shirarka loo qabanayo Somalida ee dalka looga saarayo xiliga kumeel gaarka waxaa qeyb ka ah in dalka la geyn doono ciidamo aan aheyn oo kaliya kuwa Amisom baaxada howsha ciidamada ka howl gala Somaliyana wey ka weynaan doontaa sida ay hada tahay walow aan la ogeyn in madaxweynaha cusub iyo gudoonka baarlamaanka lagu dooran doono gudaha Somaliya iyo inkale.
Qorshaha hada socda waa sidii wajiyo cusub ay ula waregi lahaayen hoganka dalka iyadoo dowlada hada la qorsheynayo iney la wareegto xukunka la rajeynayo iney wax badan ka duwanaan doonto dowladahaii hore ee dhamantood ahaa kumeel gaarka amaba TFGda.
La soco wararkena danbe iyo qaabka wadanka Somaliya looga saarayo xiliga kumeel gaarka ah oo ahda u muuqata mid xowli ku socda.
· admin on November 30 2011 11:45:25 · 0 Comments · 1821 Reads ·
14,580,905 unique visits